Zava-mahadomelina mahery vaika…: akora fototra fanamboarana cocaïne, milanja 600 kg sarona | NewsMada
Zava-mahadomelina mahery vaika…: akora fototra fanamboarana cocaïne, milanja 600 kg sarona
Vokatry ny fiaraha-miasan’ny zandarimaria Faritra Atsinanana sy ny Sampana fikarohana heloka bevava, Antananarivo, sarona ny 3 novambra teo, ny siramamy sy zava-mahadomelina mahery vaika (cocaïne) milanja 600 kg.
Naiditra am-ponja avy hatrany ny lehilahy iray tompon’antoka tamin’ny fanaovana trafikana cocaïne nafangaro tamin’ny siramamy, milanja 600 kg tratra tany Toamasina. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana Atsinanana, ny Kly Ranaivoarison Théodule, nahazo loharanom-baovao marim-pototra ny zandarimaria faritra Atsinanana momba ny fisiana siramamy mampiahiahy, ny volana aogositra lasa teo. Nanao ny fanadihadiana rehetra momba izany ny zandary ka nahitam-bokany izany ny 3 novambra 2021 lasa teo. Tratra ny gony miisa 18 feno siramamy sy zava-mahadomelina mahery vaika na “cocaïne de base” milanja 600 kg. Rehefa natao ny fanamarinana, fantatra fa “cocaïne de base” na akora fototra fanamboarana ity karazana zava-mahadomelina mahery vaika ity. Niroso tamin’ny famotorana sy ny fanadihadiana ny zandary ka olona iray no fantatra fa mpiray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity. Niroso tamin’ny fisamborana azy ny zandary ka naiditra am-ponja vonjimaika ilay voarohirohy rehefa avy natolotra ny fitsarana. Eo am-pikarohana ny naman’ity lehilahy ity kosa ny zandary amin’izao fotoana izao. Nohamafisin’ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana Atsinanana hatrany fa isan’ireo atidoha nikotrika izao ilay lehilahy ifampitadiavan’ny zandary io.
Hiara-hiasa amin’ny sampam-pitsikilovana amerikanina sy frantsay…
Nohamafisin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Gellé Serge fa zava-mahadomelina mahery vaika na “cocaïne de base” ireto tratra ireto ary efa nohamarinina tany amin’ny ladoany izany satria izy ireo no manana fitaovana avolenta hahafahana mitsirika sy mamantatra izany. Efa herinandro maromaro no nanaovana ny fikarohana rehetra momba ny fisian’ireto zava-mahadomelina ireto. “Misy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpitandro filaminana amerikanina sy frantsay amin’ny fanadihadiana sy fikarohana momba ity raharaha ity. Avy any ivelany fa mandalo fotsiny eto Madagasikara ireo cocaïne ireo ary efa fantatra ny toerana handefasana azy rehefa avy mandalo eto amintsika. Izay no nahatonga anay nifampiresaka amin’ireo vahiny ka nahatonga azy ireo hanampy satria zava-doza itony zava-mahadomelina itony” , hoy hatrany ny Seg. Anisan’ny mandray anjara amin’ny ady amin’ny fivezivezen’ny zava-mahadomelina mahery vaika ny firenena malagasy, araka ny nambarany. “Misy ifandraisany amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny mpampihorohoro iraisam-pirenena itony trafika itony”, hoy hatrany ny Seg. Marihina moa fa mahatratra 300 000 Ar ny grama amin’ny cocaïne rehefa voahodina. Na eo aza ny ezaka ataon’ny zandary, tsikaritra fa lasa toerana ifamezivezen’ireo mpanao trafikana héroïne sy cocaïne ny eto Madagasikara.